Global sy China Micromotor Industry Report, 2016-2020 - China Shandong Better Motor
Global sy China Micromotor Industry Report, 2016-2020
Global micromotor Output nijanona teo 17.5 arivo tapitrisa vondrona tamin'ny 2015, herintaona-on-taona vokatry ny 4,8%. Noho ny fanentanana mba manavao ny indostria sy ny fitaovana, ny Output antenaina mba hitsangana ny vondrona ao amin'ny 18.4 tapitrisa 2016 sy manatona 23 miliara vondrona in 2020.
Shina, izao tontolo izao lehibe indrindra mpanamboatra ny micromotors, namokatra hahatratra hatrany amin'ny 12,4 arivo tapitrisa vondrona amin'ny 2015, niakatra 6,0% avy amin'ny herintaona lasa izay, ary 70,9% nampamoahana an'i Global Wikibolana anglisy. Ny firenena micromotor Output dia mialoha mba ho akaiky ny 17 arivo tapitrisa vondrona in 2020 amin'ny CAGR ny manodidina ny 7,0% nandritra ny 2016-2020.
Keymicromotor mpanamboatra in China includeJohnson Electric, Welling Nihazonako Limited, Zhongshan Malalaka-Ocean Motor Co., Ltd., ary Wolong Electric Group Co., Ltd. Johnson Electric, toy ny lehibe indrindra mpanamboatra micromotor any Shina, ny fidiram-bola isan-taona hanatanterahany overUSD1 lavitrisa, miaraka amin'ny eran-tsena anjara 4.3% tamin'ny 2015.
Ao Shina, micromotor mahita ny fampiharana voalohany indrindra amin'ny sehatra nentim-paharazana, toy ny feo vokatra, tokantrano fitaovana, sy ny fiara, izay nanao mitambatra ohatry ny 52,4% tamin'ny 2015. Araka ny nentim-paharazana fampiharana tsena mitombo tsikelikely tototry, tena mpamily ny micromotor fivoarana dia vao misondrotra sehatra toy ny angovo vaovao fiara, wearable fitaovana, milina, UAV, ary marani-tsaina an-trano.
Information Industry: Shina entana ny VCM ho an'ny finday ny terminal dia 542kk tamin'ny 2015, niakatra 12,9% isan-taona ny taona, nipetraka 45,9% ny fitambaran'ny tontolo izao, amin'ny ankapobeny sy ny finday avo lenta entin'ny takelaka PCs. Amin'ny tsikelikely saturation ny tsena ho an'ny mpanjifa nentim-paharazana sy ny fitaovana elektronika toy ny finday avo lenta takelaka PC, wearable fitaovana ho tonga vaovao faritra fitomboana, koa boosting fangatahana micromotor. Ny fitaovana wearable Shinoa tsena dia mialoha ny hanitatra amin'ny isan-taona ny tahan'ny fitomboana maherin'ny 25%.
Automobile: Tamin'ny 2015, Shina fitakiana fiara micromotor dia 1.02 lavitrisa vondrona (24.9% ny eran-tanteraka, tokony hitsangana ny vondrona ao amin'ny 1,62 lavitrisa 2020), latsaky ny 3% avy amin'ny angovo vaovao fiara. New angovo fiara varotra amin'ny iombonana amin'ny nitombo isan-taona ny tahan'ny 152,1% nandritra ny 2011-2015 ao Shina sy, miaraka amin'ny fanohanan'ny firenena sy eo an-toerana ny politika, dia foana ny fitomboana mahery vahana nandritra ny roa taona manaraka. Tombanana ho an-tsena ny micromotors ho an'ny fiara angovo vaovao hiaro niakatra ny maherin'ny 40% isan-taona nandritra ny 2016-2020 ny fangatahana mihoatra ny 150 tapitrisa vondrona in 2020.
Robot: 248.000 indostrialy milina sy 6,41 tapitrisa fanompoana milina no namidy eran-tany 2015, niakatra 8,3% sy 35,7% avy amin'ny herintaona talohan'izay, tsirairay avy, miara-mamorona ny mangataka ny tokony ho 66,6 tapitrisa micromotors (Mpandanja ny mihoatra ny 300 tapitrisa vondrona in 2020) . Tamin'ny 2015, Sina isaina ho 22.9% 'izao tontolo izao ny indostria sy ny varotra milina ihany no tokony ho 5.0% ny fanompoana milina varotra, Midika toerana goavana ho an'ny fitomboana.
Consumer-kilasy UAV: ​​Tamin'ny 2015, maneran-kilasy mpanjifa UAV varotra nihoatra 200.000 vondrona, raha oharina amin'ny latsaky ny 20.000 ihany vondrona any Shina. Amin'ny maha-ambany haavo airspace dia misokatra tsikelikely, ny Shinoa ny tsena dia hampiditra UAV amin'ny mitombo aingana amin'ny tahan'ny maherin'ny 50%.
Ankoatra izany, ny vaovao 3D tsena ho an'ny fanontam-pirinty, marani-tsaina an-trano, ny fitaovana ara-pitsaboana, sy ny automatique laboratoara tohanan'ny politika ihany koa handaka ho fitaovana avo, fiara bebe kokoa ny fangatahana micromotors.
Global sy China Micromotor Industry Report, 2016-2020 manasongadina ny no nanaraka ny:
Global micromotor orinasa (fampandrosoana tantara, haben'ny tsena, tsena rafitra, mifaninana tontolo, sns);
Micromotor orinasa ao Shina (toe-quo, haben'ny tsena, tsena rafitra, mifaninana tontolo, fanafarana sy fanondranana, sns);
Main manokana eo ambony indostria (andriamby fitaovana, jaza, sns), mifandray amin'ny haben'ny tsena, rafitra tsena, ny fampandrosoana fironana, etc .;
Ambany indostria (vaovao, fiara, tokantrano appliance, milina, UAV, 3D fanontam-pirinty, marani-tsaina an-trano, fitaovana ara-pitsaboana, sns), mifandray amin'ny fampiharana sy ny tsena;
11 Global sy 10 Shinoa micromotor mpanamboatra (fandidiana, micromotor raharaham-barotra, ny fampandrosoana ao Shina, sns).